I-Behringer Xenyx Q802USB, umxube ofanelekileyo wepodcasting | Iindaba zeGajethi
I-Behringer Xenyx Q802USB, umxube ofanelekileyo wepodcasting
ULuis Padilla | | Izixhobo, Reviews
Ukuqala kwihlabathi le-podcasting kulula kakhulu, kodwa emva kweeveki ezimbalwa sele ufuna ukwenza izinto ngokwahlukileyo, kwaye kulapho yonke into iba nzima. Awusasebenzisi i-iPhone yakho kuphela kunye neefowuni ezizisa ebhokisini, nditsho nekhompyuter yakho kunye nemakrofoni. Ufuna ukuba nabanye abathathi-nxaxheba, ukongeza undwendwe ngamanye amaxesha, ubeke umculo okanye iziphumo ezizodwa, kwaye ekugqibeleni usasaze ngqo. Zininzi iindlela ezizezinye, ezivela kwezo zingafuni naluphi na utyalomali (usetyenziso olufana nesandi seflower) ukugqibezela izitudiyo zokurekhoda ezifumaneka kwabambalwa kakhulu. Sizinze kukhetho oluphakathi: Umxube weBehringer Xenyx Q802USB. Ixabiso layo, ubungakanani kunye nokusebenza kwayo kwenza ukuba ibe yeyona nto inomtsalane kuninzi. Sikunika iinkcukacha ezingezantsi.
1 Umxhubi uyafumaneka kuye nawuphina umntu
2 Unxibelelwano lwe-USB, ukuphuma kwe-AUX kunye ne-preamp
3 Unxibelelwano lwazo zonke iintlobo
4 Lonke ulawulo ezandleni zakho
5 Ilungele abaqalayo kunye neengcali
6 Uluvo lomhleli
Umxhubi uyafumaneka kuye nawuphina umntu
Kulula ukubona amaxabiso ezi ntlobo zezixhobo. Kufuneka ujonge kwiAmazon kwaye uyakubona ukuba kukho iimveliso ezinamaxabiso asezantsi ngokukrokra kodwa enezimvo ezimbi ngabasebenzisi, kwezinye ezingafikelelekiyo kubantu abaninzi. Umxube weXenyx Q802USB uwela ngaphantsi komda we-100 euros endicinga ukuba inokumakisha umda uninzi lwabasebenzisi abangafundanga abanokumakisha xa besenza utyalomali lolu hlobo. Kwaye ukuba sifunda ukucaciswa kwayo bade baphakame kunezo ezinye izixhobo ezifanayo kodwa ngexabiso eliphezulu.
Ngokucacileyo into esingenakukucela ngeli xabiso ngumgangatho wokwakha ofana nalowo weetafile zobungcali. Iplastiki kunye nefoyile encinci yealuminium yinto esiya kuyifumana kulo mxubeMasingazikhohlisi, ke kuyakufuneka sifumane ibhegi yezothutho efanelekileyo yokuyikhusela, ukuba sifuna ukuyiphatha ukusuka kwenye indawo iye kwenye, into enokwenzeka ngokugqibeleleyo ngenxa yobukhulu bayo kunye nobunzima bayo, enye yeenzuzo zayo ngaphezulu kwezinye iimodeli .
Unxibelelwano lwe-USB, ukuphuma kwe-AUX kunye ne-preamp
Itafile yeXenyx Q802USB inezinto ezithile ezahlulahlula kwezinye iitafile zoluhlu lwamaxabiso afanayo, kwaye ezenza ukuba ibe yeyona inomdla kuzo zonke. Okokuqala ithuba lokuyixhuma kwi-USB yekhompyuter yakho, eya kukuvumela ukuba ukhethe ujongano lwesandi sokufaka okanye imveliso. Okungabalulekanga kangako kukukhutshwa kwe-AUX, okanye mandithi, iFX SEND njengoko ibizwa ngokuba ngumxube, ilungele ukuthumela isandi ngejelo elingelona eliphambili njengoko siza kuchaza kamva. Kwaye ekugqibeleni i-preamplifier yayo, eya kuthi ivumele ii-microphone ezinamandla ukuba zisebenze ngaphandle kweengxaki (siza kuthetha ngeentlobo zeemakrofoni kwelinye inqaku). Uya kufumana iitafile ezimbalwa kakhulu ezinale mpawu zintathu kwaye zingaphantsi kwe- € 100, nangaphantsi kwe- € 200 ndingazama ukutsho.
Unxibelelwano lwazo zonke iintlobo
Sinokudibana oku-2 kwii-microphone ze-XLR (1) kunye nee-preamp zazo ezonyukela kwi-60DB yenzuzo, ngaphezulu ngokwaneleyo ukuba imakrofoni yakho enamandla iviwe. Kwaye eyona nto intle kukuba iyakwazi ukuyenza ngaphandle kokongeza ingxolo. Ngokucacileyo, ingxolo engaphezulu iya kuvela, kuba imic iya kuthatha yonke ingxolo ejikeleze wena, kodwa iya kuba ngumcimbi wokufumana indawo efanelekileyo ekuvumela ukuba ufumane ilizwi lakho kwinqanaba elifunwayo ngaphandle kokukhetha ingxolo kuyo yonke into ndikujikelezile. Ukuba nokunxibelelana kabini kulungile ukuba ungarekhoda nomntu "kwi studio" sakho ke akufuneki wabelane ngemakrofoni.
Ukwanazo nezinye izinto ezimbini (2,3) onokuthi uqhagamshele kuzo i-iPhone yakho ukongeza umculo, i-iPad yokuqhagamshela iSkype, okanye umthombo wesandi owufunayo. Ungasebenzisa kwakhona i-Stereo Aux Return (4) njengegalelo lesandi ukuba uyayifuna.
Kodwa elinye lamandla alo mxube nguFX Send, eyaziwa ngokuba yi-AUX Out kwezinye ii-consoles. Iziphumo zomsindo zilungele ukukwazi ukurekhoda ii-podcast usebenzisa i-Skype, njengoko ikuvumela ukuba ukhethe ukuba yeyiphi na imijelo yeaudiyo esuka kwikhonsoli yokuqhubela phambili kule FX Thumela ukuyithumela kwakhona kwi-Skype kwaye ngokuzimeleyo kwisiphumo esiphambili sesandi sekhonsoli. Sifumana ntoni koku? Ukuba ii-Skype interlocutors zakho zingaphambani namazwi azo abuyele kubo, kwaye unokongeza iaudiyo kunye nezinye iziphumo kwisandi sakho kwaye uzithumele kubo ngeSkype.
Ukuba itheyibhile inegalelo elininzi, ayinaziphumo zimbalwa. Ukongeza kunxibelelwano lwe-USB ekuvumela ukuba uthumele isandi kwikhompyuter yakho ngolu nxibelelwano, Unemveliso yeefowuni (6), enye yokulawula ngezihlanganisi ezimbini (7) kunye nenye imveliso ephambili enezinye izihlanganisi zejack (8) Nokuba kusezantsi kwetafile unenye igalelo leRCA (9). Ewe ayizukuba kukuswela konxibelelwano.
Lonke ulawulo ezandleni zakho
I-Behringer Xenyx Q802USB ikhonsoli ikwavumela ukuba ulawule inqanaba lesandi kwimithombo nganye. Ukongeza ekunikezeleni amandla okongeza uxinzelelo kwisandi seemakrofoni zakho ezixhunyiwe (10), isilinganisi esipheleleyo sikuvumela ukuba uhlengahlengise amanqanaba egalelo ezine eziphambili zomsindo (11). Njengoko besesitshilo ngaphambili, ikhonsoli ikuvumela ukuba uthathe isigqibo sokuba ngawaphi amajelo athunyelwe kwiFX Send output (12), nokuba bakweliphi inqanaba lesandi abathunyelwe kulo. Ukuba ufuna ijelo lingathunyelwa kuloo mveliso, kuya kufuneka usete ku-zero, ujike ngokupheleleyo ngasekhohlo. Akukho kunqongophala kolawulo lwe-PAN kwimakrofoni kunye nokulinganisela kokufakwa kweaudiyo (13).
Elinye lamagalelo ama-4 aphambili alalelwayo anolawulo lwenqanaba lokuphuma kumxube ophambili. Ke ukuba imakrofoni yakho inenqanaba elifanelekileyo kodwa incoko engena isuka kwi-Skype ukuya kwelinye lamagalelo aphambili ifika kwinqanaba elisezantsi, unokuyibuyisela ngokulula ngezi knob zijikelezayo (14). Unokwenza okufanayo nakwimveliso yentloko (15) kunye nomxube ophambili ohamba nge-USB (16).
Ilungele abaqalayo kunye neengcali
Ngokuqinisekileyo ukuba umsebenzi wakho kukuhlelwa kwesandi, le khonkco yokuxuba iya kuba mfutshane, kodwa ukuthi yeyona console ilungileyo kwabo baqala kweli hlabathi yinto engekhoyo. I-Behringer Xenyx Q802USB ngumxubi othi, ngenxa yokusebenza kwayo kunye nomgangatho wesandi, ikwinqanaba lezinye izinto ezininzi ezibiza kakhulu.. Kucacile ukuba xa une «PRO» itafile ezandleni zakho, i-Behinger ijongeka ngathi yinto yokudlala, kodwa nje ukuba uyisebenzise kwaye uyayixabisa isiphumo, umbono wakho uya kuphucula kakhulu, ngakumbi xa uyazi ukuba yintoni «PRO» iindleko zetafile.
Behring Xenyx Q802USB
Uphengululo lwe: ULuis Padilla
Ukukhanya kunye ne-compact
Ukungena nokuphuma kwazo zonke iintlobo
Preamps, USB kunye Aux ngaphandle
Akukho tshintsho lokubulala
Izinto ezisemgangathweni ezifanelekileyo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Izixhobo » I-Behringer Xenyx Q802USB, umxube ofanelekileyo wepodcasting
Molo, ndingathanda ukwazi ukuba ndizilungisa njani iingxaki ze-latency endinikwa zizo xa ndirekhoda. Ekuqaleni kwakungekho njalo. Andazi nokuba kungenxa yokuba ndongeze iiplagi kwaye ikhadi liwa… ..
Amaqhinga ali-10 ukuze ube yingcali kuWhatsApp
Uhlalutyo lweiglasi zeMars MGL1